Politikam-pampandrosoana : RESY LAHATRA NY TIM -
AccueilRaharaham-pirenenaPolitikam-pampandrosoana : RESY LAHATRA NY TIM
27/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mazava ny politikam-pampandrosoana entin’ny Filoha voafidim-bahoaka Hery Rajaonarimampianina. Voarakitry ny PND ( paika nasionaly ho an’ny fampandrosoana) ary efa novatsian’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena. Noho ny fisian’ny politika mazava toa izany no nanomezan’ny mpamatsy vola an’iny 10 miliara dolara, azo tamin’ny fivorian’ny mpamatsy vola tany Paris iny. Tsy misy atahorana araka izany ny fampandrosoana entin’ny Filoham-pirenena, fa dia efa io hita-maso io.
Betsaka ny resy lahatra amin’izany politikam-pampandrosoana entin’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izany. Manohana izany ny depiote Tim Randriambolaina Gerry, voafidy tetsy Avaradrano. Na dia voafidy tamin’ny loko hafa aza izy, dia manana saina mivelatra ka naleony nanolo-tanana ny filoham-pirenena mitondra mazava mankany amin’ny fampandrosoana tena izy.
Tsy hanavahana loko tokoa mantsy ny fampandrosoana. Izay hita fa tena hitondra izany fampandrosoana izany dia tsara tohanana. Ao anatin’ny kihon-dalana farany hisian’ny fanarenana tokoa mantsy isika, ka rariny raha omena tolo-tanana ny filoham-pirenena. Mpanao politika mitsinjo ny mahasoa ny vahoaka tokoa raha ity depiote Randriambolaina Gerry ity. Tsy afaka hanampanantena tsy misy an’ireo vahoaka nifidy azy tokoa mantsy izy raha miolonolona irery, satria ny fampandrosoana tsy vitan’ny kopaka am-bava. Ny filoham-pirenena ankehitriny aloha izao no hita fa mitondra izany fampandrosoana izany ka marina mihitsy ny an’ity depiote Gerry ity raha nanome tolo-tanana ny Filoha.
Tsiahivina fa efa maromaro ny depiote Tim, nanolo-tanana ny filoham-pirenena ka nisafidy ny hiara-dalana aminy amin’ny fanatanterahana ny politikam-pampandrosoana entiny. Isan’izany ny depiote Tim Benjamin Andriamitantsoa ( Avaradrano) sy Guillaume Ravahimanana ( Miarinarivo). Tsy midika ho famadihana palitao akory izao hataon’izy ireo izao fa izy ireo mihitsy aza no mendrika ho mpanao politika mitsinjo ny fampandrosoana. Tsy misy antony hijanonana anaty vondron’antoko tsy haninon-tsy haninona tokoa. Marina ny azy!